Nepali Articles » Blog Archive » Krishna Chandra Singh Pradhan – Shakespear Hami Ra Marne Shalik Haru
Krishna Chandra Singh Pradhan – Shakespear Hami Ra Marne Shalik Haru
कृष्णचन्द्रसिंह प्रधान – शेक्सपियर, हामी र मर्ने सालिकहरू
(Source: मधुपर्क २०६६ असोज)
भरखरै उनको एउटा अर्को तस्बिर सार्वजनिक गरिएको छ । यो तस्विर उनको मृत्युको छ वर्षअघि मार्टिन डोरसाउनले बनाएका हुन् भन्ने उनका अनुयायी स्टेन्ले वेल्सको अनुमान छ । अनि तस्विर हेरेर शेक्सपियरलाई ‘हिरोकवि’ भने ।
महोदय ! तपाईंको र मेरो युग एउटै होइन, समाज एउटै होइन । संसार धेरै बदलिसक्यो । मान्यता, प्रवृत्ति, आदर्श, विचारहरू फरक भइसके । वर्तमान पछ्याउँदै जब तपाईं हिंड्न सक्नुहुन्न । तपाईंलाई पछ्याएर अबको समयपछि लाग्दैन । फेरि पनि पुस्तौँपछिका पुस्तामा तपाईं आफूलाई जीवित देख्नु हुन्छ । विगतको अनुसरण गरेर अनागतको उपेक्षा गर्नु एक प्रकारको मृत्युवरण गर्नु होइन र ? तपाईं जन्मेको ठाउँ पनि तपाईंको बेलाको जस्तो छैन । यो गाउँ, सडक, वातावरण, मानिसहरू सब अर्कै भइसके । बेलायत अर्कै भइसक्यो तर अहिले पनि जिउँदै छु भन्नु हुन्छ तपाईं ।
आफू जन्मँदाको समयभन्दा बढी हामी बोल्दैनौँ । त्यसलाई शब्द दिने गर्छ साहित्यले । त्यसैले भन्दैछु ममा मेरो समय समाज, मानिसहरू सबैलाई एक साथ पढ्न सक्छौ । उनीहरूका पीडा सुन्न सक्छौ। षडयन्त्र, अपराध देख्न सक्छौ। मन, चरित्र बुझ्न सक्छौं । वास्तवमा स्वयंको मौलिकताले नूतनता प्रदान गर्ने सिर्जनात्मकताको बिम्ब भई हामी पछिको युगमा उपस्थिति हुने गर्छौं । वाणीझैँ सम्बोधित शब्द तिमी हौ । तिम्रा आकाङ्क्षा, अभाव, सपनाहरूको प्रतीकात्मक बिम्ब भएर त्यहाँ व्यक्तिने गर्छौ । यसै अर्थमा जीवित छु भनेको हुँ- तिमी भएर पनि । शेषपछिको पुस्ता भएर पनि । समयअनुसार कला, साहित्यमा भइरहने सिर्जना, प्रयोगहरूले तिनको निरन्तरतालाई सङ्केत गर्न खोजेको हुँ । यही शाश्वततालाई बुझाउने प्रतीकात्मक अवस्थितिलाई मेरो बाँच्नुले बिम्बित गर्छ ।
भने नि स्ट्रेटफोर्ड गाउँ अब सहर भइसक्यो । (हाम्रो दाँजोमा भन्दैछु ।) उनीहरू त गाउँ नै भन्छन् । पहिलेको तुलनामा त्यहाँ सुविधा बढ्यो होला । धेरै व्यवस्थित गरियो होला । चाहिने सुधारहरू पनि निकै भए होलान् । जीवनस्तर प्रशस्त उठेको हुनुपर्छ । आधुनिक प्रविधिहरू त्यहाँ पनि पुग्यो होला । कुनै कुराको अभाव र सुविधाहरू सायद अब छैन भन्ठान्छु । यदि भइकन पनि गाउँको आफ्नो जुन चिनारी हो, प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप, आकृति-प्रकृतिहरू लाग्छ जीवित छन् । त्यसलाई मास्नेगरी आधुनिकताले हस्तक्षेप गरेको देखिन । मलाई लाग्यो स्ट्रेटफोर्ड गाउँजस्तो पनि छैन, आधुनिक सहर पनि होइन । दुवैलाई एकसाथ देख्छु स्ट्रेटफोर्डमा । ग्रामीण क्यानभासमा सहर मुस्कुराइरहेजस्तो, सहरी आधुनिकतामा गाउँ रमाइरहे जस्तो । मैले त भादगाउँ पो सम्झेछु ।
अनि आफ्नो देश र्फकन्छु । यहाँका देवकोटा र उनको मैतीदेवीको घर हेर्छु । बालकृष्ण समलाई सम्झन्छु र उनको ज्ञानेश्वर स्थित निवासस्थान पुग्छु । एउटालाई भारतीय कवि पन्त, प्रसाद, निराला भने, अर्कोलाई नेपालका शेक्सपियर । कसैसँग तुलना गरेर कसैको प्रतिष्ठा वा उचाइले सिद्ध गर्ने महानताले कोही कहाँ तौलिन्छन् ? हरेकको आफ्नै राष्ट्रिय परिवेश हुन्छ । मौलिक आधार स्रोतहरू हुन्छन् । यसबाट परिचालित प्रयोग, विशिष्टता, सीप र योगदानहरू फरक फरक हुनसक्छ । यिनीहरू नै पनि यथेष्ट छैन र कसैको महानता परिगेल्नलाई ?
सन्दर्भमा गाँसिएको प्रश्न हो यो मेरो । प्रसङ्ग त देवकोटा र बालकृष्ण सम हुन् । उनीहरू जन्मेको घर, उनीहरूले प्रयोग गर्ने गरेका वस्तु जो ऐतिहासिक अर्थ राख्छन्- गायव हुँदैछन् । तिनको संरक्षण हुन सकेनन् न परिवारबाट भइदिन्छ, न साहित्यिक सङ्घ-संस्थाहरूबाट न सरकारी, अर्धसरकारी स्तरबाट । आदिकवि भानुभक्तलाई मात्रै होइन भारतका पन्त, प्रसाद, निराला भनिने महाकवि देवकोटालाई पनि सम्झेनौ, शेक्सपियरको उपािध पाउने बालकृष्ण समलाई पनि याद गरेनौं । बालकृष्ण समको सालिक हेर्दा लाग्छ घरबाट निष्कासित भई कमलपोखरी छेउको डिलमा बसेर कसैको आश्रय खोजिरहेका छन् । उनलाई त्यहीँका छिमेकीहरूले पर्यन्त चौबाटोमा उभिन दिएनन् । रानीपोखरीको पश्चिमपट्ट िदरबार हाइस्कुलको अगाडिको पर्खालमा अडेसिएर भानुभक्त लाग्छ चौकीदारी गरिरहेछन् । अनि आफ्नो घर हेर्दै एउटा कुनामा कोचि्रएका कवि सिद्धिचरणलाई यसैको सुरक्षा गर्न खटिएको जस्तो लाग्छ । हामी यो अपमानित बोध गर्दैनौं ।
posted under Krishna Chandra Singh Pradhan